I-Synephrine powder (94-07-5) hplc = 98% | I-AASraw Fat Loss powder
/ Imikhiqizo / I-Fat Loss powder / Synephrine powder
SKU: 94-07-5. Isigaba: I-Fat Loss powder
I-AASraw inokukwazi ukwenza kanye nokukwazi ukukhiqiza kusuka kugremu kuya ku-mass order ye-Synephrine powder (94-07-5), ngaphansi komthethonqubo we-CGMP kanye nesistimu yokulawula ikhwalithi elandelwayo.
Ividiyo ye-Synephrine powder
Ama-Raw Synephrine powder abalingiswa basisekelo
Igama: I-Synephrine powder
Formula Yamamolekhula: C9H13NO2
I-Melt Point: 187 ° C
I-Raw Synephrine powder emjikelezweni we-steroids
I-Synephrine powder iyi-alkaloid engokwemvelo eyenziwa njengokuthi ivuselela futhi i-nootropic ngenxa yokuthi ithinta ukulahlekelwa kwesisindo nezinqubo zokucatshangelwa ebuchosheni. Ngokuvamile i-Synephrine powder itholakala kwezinye zezitshalo nezilwane, ikakhulukazi i-Synephrine powder etholakalayo ezakhiweni zokudla ezithathwe ekudleni isuswa futhi isetshenziswe kusukela ku-Citrus Aurantium Plant eyaziwa ngokuthi yi-Bitter Orange.
Ukusetshenziswa kokusetshenziswa kwe-Raw Synephrine
Ukuze usebenzise ngokunenzuzo izakhiwo ze-metabolic kanye namandla ze-Synephrine powder, kungcono ukuthathwe into yokuqala ekuseni noma imizuzu engu-15 - 30 ngaphambi kokuzivocavoca. Ama-pre-workout kanye namafutha okulahlekelwa amafutha ane-Synephrine powder kufanele athathwe ngamanzi ngaphambi kokuzivocavoca. I-dose esebenzayo kakhulu i-15 - 25 milligrams ngayinye.
Yiziphi izinhlobo zeZingxenye okufanele Ngizilindele kusuka ku-Raw Synephrine powder
Njengazo zonke izithako zemvelo, ungafaki ukulindela okungaqondakali okukhulu kwi-Synephrine powder.
Khumbula ukuthi izithako azakhi ukwakha umzimba omkhulu. Ukuzinikezela ekuqeqeshweni okufanele kanye nokudla okunomsoco.
Lokho kusho, yilokho ongakulindela kusuka ku-Synephrine powder supplementation:
Ukunyuka okuncane kwesilinganiso sakho se-basal.
Ukunciphisa kancane umsebenzi we-fat cell receptors okuvimbela ukugqugquzelwa kwamafutha.
Ukunyuka okuncane emthonjeni we-thermic wokudla, noma 'izindleko zamandla' zokugubha ukudla.
Uma lokho kungabonakali konke lokho okwedlula kuwe, ngiyaqonda. Ngifisa nje ukuyibiza njengokuthi.
Lokho kusho, akusho ukuthi akufanele ukongeze nge-syneprhine. Kusho nje ukuthi akufanele usonge kuphela nge-Synephrine powder uma ufuna ngempela ukubona ukuthuthukiswa.
Okufanayo kungashiwo ngezinsiza eziningi zemvelo.
Ngabo ngokwabo, ngabanye, bayaphumelela. Thatha okulungile ndawonye, ​​noma kunjalo, nemiphumela eqoqayo ingabonakala.
Isibonelo, uma ubambisana ne-Synephrine powder nge-naringin ne-hesperidin, ungakwazi ukuphindaphinda kathathu ukuqinisa umzimba. Futhi uma wengeza i-caffeine, imiphumela iyabonakala nakakhulu.
Mayelana nokulahlekelwa kwangempela kwamafutha, uma uthatha lezi zindlovu ezine nsuku zonke (ikakhulukazi ngaphambi kokuphuma), kunengqondo ukuthatha amapounds angu-0.5 wokulahlekelwa kwamafutha ngesonto.
Futhi lokho kukwanele ukukhathazeka uma uqhubeka uqeqesha kanzima futhi udle kahle.
(Ngifanele ngikhulume ukuthi ungakwazi ukulahlekelwa amafutha anenkani-ikakhulukazi uma ufaka i-yohimbine ibe ingxube.)
Isexwayiso ku-Raw Synephrine powder
Ngaphandle kwamandla okuvimbela ukudla, i-Synephrine powder ibonisa ubufakazi obukhulu bokukwazi ukushisa amafutha ngokwayo. Ngakho-ke, i-Synephrine powder ayikwazi ukubhekwa njengomshisa wokushisa. Ngokuthatha i-Synephrine powder nge-burner fat, noma kunjalo, uzozizwa ukuthi ngeke ulingeke ukuba uphuze phakathi nosuku lwakho njengoba uzohlala ugcwele isikhathi eside futhi uthanda ukudla ngaphezu kwendlela yakho yansukuzonke.
Kungenxa yokuthi kungumsizi emakethe akusho ukuthi kufanele uyithathe. I-Synephrine powder isalokhu ihlolwa kanti neminye imiphumela ibonisa ukuthi uma idliwe, ingaba nemiphumela emibi, njengezinsizwa, isicashu, kanye nemizwa yokudangala esiswini. Kuyinto enhle ukuxwayisa ukuthi kusukela i-Synephrine powder kubhekwa njengento evuselelayo, ukuthi labo abanesifo esiphakeme segazi noma abanengozi yegazi, banomlando womndeni wesifo senhliziyo noma baye bahlaselwa isifo, kufanele bagweme ukuthatha lo mkhiqizo kungase kubangele ukwanda kwengozi ngoba kuphakamisa isilinganiso senhliziyo kancane.
Ngakho, umbuzo oyinhloko, uma kufanele uthathe i-Syneprhine? Ngokwethembeka, ngaphandle kokuthi uyisebenzisele ukwelapha ukutheleleka kwesikhumba fungal, angiboni isizathu sokuthi kungani umuntu kufanele adle lesi sengezo nhlobo. Uma ungakutshelwanga udokotela ukuba athathe i-synpehrin, mane nje uhlale kuyo njengoba izingozi ziphezulu kakhulu ucabangela umvuzo ongase ukwazi ukukunikeza. Nakuba ngingakwazi ukukutshela ukuthi yini okufanele uyenze futhi akufanele uyithathe, ngikholelwa ngokuqinile ngokuthi ngokudla lo mkhiqizo uma ungafundiswa futhi, ukuthi ekugcineni ungagcina wenze umzimba wakho ube yingozi ngaphezu kokuhle.
Uma ucindezela nge-intanethi ukuze uphendule, uzothola izixwayiso ezimbi ukuthi i-Synephrine powder ingandisa ingozi yokuba nomfutho wegazi ophakeme, ukuphelelwa amandla, ukuhlaselwa yinhliziyo, ukushaya isifo, kanye nezinye 'imiphumela emibi.'
Izifundo eziningana ziye zabonisa ukuthi i-Synephrine powder ayikwenyusisi ukucindezelwa kwegazi, futhi ucwaningo lubonisa ukuthi ngokuvamile luphephile futhi lubekezeleleke kahle.
Okuyiqiniso ukuthi uma ufana nabantu abaningi, ngeke uqaphele okuningi uma uthatha i-Synephrine powder Iningi libika ukunyuka okuncane kwamandla ngaphandle kwezinto ezincane ezihlotshaniswa nezivunguvungu (ama-jitters, i-nausea, ukushaya kwenhliziyo okusheshayo, njll. ).
Lokho kusho ukuthi, uma unemibandela yezokwelapha noma uthatha noma yimiphi imithi engase iphikisana ne-supplementation ne-Synephrine powder, xhumana nodokotela wakho ngaphambi kokusetshenziswa, yebo. Izibonelo ziphezulu zomshoshaphansi wegazi, izidakamizwa eziphikisayo, ne-HIV / AIDS.
I-Synephrine powder, noma njengoba ivame ukuyazi, i-Bitter Orange, isitshalo lapho iqabunga, izithelo nezithelo zezithelo zivunwa futhi zisetshenziselwa ukwenza imithi kanye ne-peel ngokwayo isetshenziselwa ukwenza amafutha. Amafutha omuncu omuncu angasetshenziswa esikhumbeni ukusiza ukuphatha izifo, njengezinyosi nabadlali bezinyawo.
Nakuba izifundo eziningi zisenziwa, kukhona nobufakazi obanele bokubonisa ukuthi uma umuntu edla inani elanele lamanandi ababayo, analo ikhono lokunciphisa ukudla. Yilapho i-Synephrine powder ibonisa izimpawu zokulahlekelwa kwesisindo phakathi kwabasebenzisi njengoba nje kudala umphumela ohlala njalo emzimbeni ukuze umthengi azizwe egcwele isikhathi eside futhi anciphise noma yisiphi isilingo sokufisa noma isifiso sokudla ukudla okungeziwe. Ngokudla ukudla okuncane, udla amakholori angaphansi, okwenza ukuthi ulahlekelwe isisindo isikhathi esithile.
I-Synephrine Raw Powder
I-Raw Synephrine Marketing Marketing
Indlela yokuthenga i-Synephrine powder kusuka ku-AASraw
I-1. Ukuze uxhumane nathi nge-imeyili yethu yokuhlola inqubomgomo, noma ummeli we-intanethi ye-skype ummeleli (CSR).
Ama-Recipes wokupheka ama-Powder ama-Synephrine:
Ingabe i-Synephrine powder iyasiza ekulahlekelweni kwesisindo?